Shiinaha Customized boorsada boorsada wax-soosaarayaasha, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada dhabarka shiraaca > Boorsada weelka wax lagu dhajiyay
(1) Boorsadan hal-garabka ah waxay leedahay astaamaha biyuhu, iftiiminta, nuugista shoogga, xirashada caabbinta, muddada dheer ee adeegga, shaqeynta badan, iwm. (2) Waad isticmaali kartaa inta lagu jiro shaqada, safarka, safarada ganacsiga, iyo xilliga firaaqada. Waxay si fudud u kaydin kartaa laptop-kaaga shaqada iyo qalabka durugsan, sida kiiboodhka, jiirka, U diskka, diskka moobiilka, dharka, dalladda, iwm.
1. Hordhaca badeecada ee boorsada dhabarka shiraacda:
(1) Dharka kore ee rucksackka wax laga sameeyay wuxuu ka samaysan yahay shiraac hilib wax lagu daray + PU dhar. Maadadani waxay leedahay xoog silibis adag iyo adkeysi abrasion. Dahaarka biyaha-celiya ee wax-soo-saarka ah ayaa si wax ku ool ah uga hortagi kara roobka qoyaanka bacda. Isku darka wuxuu leeyahay waxqabad aan biyuhu fiicnayn, oo wuxuu leeyahay dhalaal sharaf leh. Waxqabadka biyuhu wuxuu gaari karaa: IPX3 ama IPX4.
(2) Dahaarka gudaha wuxuu ka samaysan yahay maro cudbi ah, oo dareemaya raaxo.
(4) Jiinyeerka sheyga ayaa ah qaybta ugu muhiimsan. Tayada sheyga ayaa sifeeya heerka sheyga, sidaa darteed boorsadeena waxay isticmaashaa jiinyeerka YKK ee aadka loo yaqaan iyo sumcadda caanka ah ee Shiinaha ee SBS.
(5) Boorsadeena shiraacda ah ee sii kordheysa waa dhar-u-adkeysi, biyo-la'aan, yareyn culeys, dallad, koobka biyaha, iwm.
2. Laba-in-hal keli ah iyo laba-beegyada wax soo saarka boorsada dhabarka garbaha (qeexitaannada)
Dhererka 28cmX Width 15cmX Dhererka 40cm
3. Sifooyinka alaabta iyo codsiyada shaashadda boorsada weelka
(1) Boorsadan hal-garabka ah waxay leedahay astaamaha biyuhu, iftiinka, nuugista shoogga, iska caabbinta, nolosha muddada dheer, shaqeynta badan, iwm.
(2) Waad isticmaali kartaa inta lagu jiro shaqada, safarka, safarada ganacsiga, iyo waqtiga firaaqada. Waxay si fudud u kaydin kartaa laptop-kaaga shaqada iyo qalabka durugsan, sida kiiboodhka, jiirka, U diskka, diskka moobiilka, dharka, dalladda, iwm.
5. Xirxirida iyo gaarsiinta boorsada dhabarka shiraacda sii kordheysa
S6: Mudo intee le'eg ayaa wareegga dhalmadaada?
(1) Waqtiga dirista muunadda: Kadib helitaanka amarka muunadda, bixinta saamiga waxay bilaabi doontaa tirinta. Muddada tijaabada ayaa qiyaastii ah 7 maalmood oo shaqo. Meelo kala duwan ayaa leh waqtiyo kala duwan oo rar iyo xilliyo kala duwan oo qaadashada shay-baarka. Shaybaarkayaga caadiga ah ayaa la raraa iyadoo la adeegsanayo UPS. Iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, shirkadda saadka ee aad sheegto ayaa laguu diyaarin karaa gaadiid.
(2) Wareegga gudbinta wax soosaarka ballaaran: Kadib helitaanka qandaraaska wax soosaarka ballaaran iyo bixinta hore, waqtiga ayaa bilaaban doona. Wareegga wax soo saarku wuxuu ku saabsan yahay 45 maalmood oo shaqo.
Calaamadaha kulul: Boorsada shiraacda wax soosaartay, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka